फ्रान्ससंगै उरुगे विजयी ! बनेनन मेस्सी र रोनाल्डो बिश्वकप जिताउन योग्य ! - Experience Best News from Nepal
फ्रान्ससंगै उरुगे विजयी ! बनेनन मेस्सी र रोनाल्डो बिश्वकप जिताउन योग्य !
प्रकाशित मिति : आइतवार, असार १७, २०७५
रसिया, जारी बिश्वकप ग्रुप चरण खेल सम्पन्न हुनुको साथै दोस्रो चरणमा नक आउट चरण सुरु भएको छ । आज खास गरेर दुइ ठुला खेल सम्पन्न भयो जस अन्तर्गत फ्रान्स बिरुद्ध अर्जेन्टिना र पोर्चुगल बिरुद्ध उरुगे भएको थियो पहिलो खेल फ्रान्स बिरुद्ध अर्जेन्टिना भएको थियो र बिजेता फ्रान्स बन्यो । २०१८ को सबै भन्दा धेरै गोल पनि आजको खेलमा देखिएको थियो ७ गोल ।
दोस्रो खेल नेपाली समय ११:४५ मा भएको खेल पोर्चुगल र उरुगे भएको खेलमा भने उरुगे विजय भएको छ । खेलको सुरुवाती ७ औ मिनेटमा एदिन्सन कावानीले गरेको गोलसंगै अग्रता लिएको उरुगेलाइ ५५ औ मिनेटमा पोर्चुगलका पेपेले हेडर मार्फत गोल गर्दै खेललाइ बराबरीमा लेरयेका थिए तर पुन काबानीले ६२औ मिनेटमा गोल गर्दै खेलमा अग्रता दिलाए र अन्तिम सम्म नै कुनै अन्य गोल हुन सकेन र खेल २-१ले उरुगेको हातमा पुग्यो ।
बलको निकै पोसेस्सन प्राप्त गरेको पोर्चुगलले बललाइ जालीको दिशा भने दिन सकेन आजै नाम कहलिएका दुवै स्टार खेल्दै रोनाल्डो र मेस्सीले बिश्वकप फुटबलबाट घरको यात्रा तय गरे । पहिलो खेल फ्रान्स र अर्जेन्टिना खेल्दा फ्रान्स विजय बनेको थियो खेलमा फ्रान्कला एम बाप्पे म्यान अफ द म्याच बनेका थिए उनले फ्रान्सका लागि २ गोल गरेका थिए ।
उरुगे र पोर्चुगलको खेलमा भने म्यान अफ द म्याच उरुगेका कभानी घोसित भए ।
यी दुई खेल संगै मेस्सी र रोनाल्डो बिश्वकप बताई बाहिरिदै छन् । दुवैको यो अन्तिम बिश्वकप रहेको कुरा पनि खुलेको छ ।
भोलिको खेल पहिलो रसिया र स्पेन खेल्दै छन् भने दोस्रो खेल क्रोसिया र डेनमार्क भिड्दै छन ।खेल नेपाली समय ७:४५ र ११: ४५ मा हुदै छ ।